Siyintoni Isandulela Seswekile? | Manna Health
Isandulela Seswekile kuxa umlinganiselo weswekile egazini uphakamile kunomlinganiselo oqhelekileyo, kodwa ungekafiki kuhlobo 2 lweswekile. Xa isandulela seswekile singanyangwa, sinokukhokelela kuhlobo 2 lweswekile kwiminyaka eli-10 okanye ngaphantsi. Ukuba unesandulela seswekile, iimpawu zexesha elide zeswekile — njengentliziyo nokonala kwenkqubo yokujikeleza kwegazi emzimbeni — zinokuba sele ziqalile.
Ngethamsanqa sineendaba ezimnandi! Isandulela seswekile sinokuba sikunika ithuma lokuphucula impilo yakho, uze uthabathe amanyathelo afanelekileyo okuthintela isandulela seswekile singade sibe luhlobo 2 lweswekile.
Ngotshintsho lwempilo ebomini bakho unako ukubuyisa umlinganiselo weswekile egazini ube ngoqhelekileyo. Olu tshintsho kwimpilo yobomi bakho inokuquka izidlo ezisempilweni, ukuzilolonga okuthe xhaxha, nokugcina ubhukhulu bomzimba busempilweni.
Iimpawu Sesandulela Swekile
Enye yezona ngozi zinkulu zokuba nesandulela swekile kukuba akukho nto iluphawu ibonakalayo.
Uphawu olunokufane lubonakale xa sele ukufuphi ukuba ube kuhlobo 2 lweswekile zizibhaxu ezimnyama kulusu emzimbeni ngenxa yesifo esibizwa ngokuthi acanthosis nigricans. Ezi zibhaxu zidla ngokubakho kwiindawo ezithile njengasentanyeni, kwiingqiniba, emakhwapheni, emadolweni naseminweni.
Iimpawu ezinokubonisa ukuba isandulela seswekile sele siluhlobo 2 lweswekile zinokuquka:
Here are 7 Foods that help fight diabetes…
Iinkalo Ezinegalelo Kwisandulela Seswekile
Zikhona iinkalo ezinokwenyusa isichenge sokuba nesandulela seswekile, ezinokuquka:
Ukutyeba kakhulu, ukuba nobunzima bomzimba kwi-indeksi ibe ngaphezulu kwama-25
Xa uneminyaka engama-45 nangaphezulu
Uhlobo 2 lwesekile lukwimfuza
Ungumntu oMnyama, i-Hispanic okanye waseAsiya
Ukhe waneswekile yesinyi ngoxa ubukhulelwe, okanye emva kokubeleka usana onobunzima okungaphezulu kwe-4.1 kg.
Unengxaki ye-polycystic ovary syndrome(PCOS) — imeko ebangelwa kukuba sexesheni ngendlela engaqhelekanga, ukukhula kweenwele kakhulu nokutyeba kakhulu
Unoxinezeleko oluphezulu lwegazi
I-high-density lipoprotein (HDL) cholesterol yakho iphezulu ibe ingaphantsi kwe-0.9 mmol/L, okanye umlinganiselo we-triglyceride ungaphezulu kwe-2.83 mmol/L.
Iingxaki zesandulela seswekile
Ezona ngxaki zinkulu zesandulela seswekile kukusuka nje ibe luhlobo 2 lweswekile, nolunokukhokelela kwezinye iingxaki ezinkulu zempilo ezifana:
Uxinezeleko oluphezulu lwegazi
Ukufa icala (Stroke)
Ukunqunyulwa amalungu omzimba
Already suffering from type-2 Diabetes? Some people can reverse it. Learn more…
Ukunyaka Isandulela Seswekile
Utshintsho olufanelekileyo ebomini lunokubuyisela imilinganiselo yeswekile egazini kweqhelekileyo, okanye ubuncinane ukwehlisa imilinganiselo ibe ngaphantsi kweyomntu onohlobo 2 lweswekile. Kuncomelo lokugcina isandulela seswekile singade siqhubeke sibe yiswekile siquka:
Yitya okutya okusempilweni –
Amafutha amancinane, iikhalori eziphantsi, kodwa ube nefayibha eninzi kukutya okukhethayo.
Hlalela iziqhamo, imifuno nengqolowo. Qiniseka ukuba uyatshintsha tshintsha ukuze ufikelele usukelo lwakho ngaphandle kutya izinto ezimbi nezingenampilo. Khuphela Manna Diet e-Book enayo yonke inkcazelo, neezondlo neeresipi ezikunceda wehlisa ubunzima bomzimba.
Eat yourself healthy with a diabetes diet. Find out how…
Ukufumana ukuzilolonga okwaneleyo –
Usukelo kukuba wenze usebenzi oshukumisa umzimba ubuncinane imizuzu engama-30 ukusa kwengama-60 iintsuku ezininzi evekini. Makungagqithi iintsuku ezimbini ungakhange uzilolonge.
Akuyomfuneko ukuba uhlale iiyure ejimini; yithi chu nje ngeenyawo, uqhube ibhayisekile, uye kuquba imigcana embalwa uza kube wenze lukhulu. Ukuba akunaxesha, yahlule ibe ziiseshoni ezincinane onokuzahlula imini yonke.
Sincomela nokuzilolonga okufana nokuphakamisa iintsimbi, nokuba kukabini ngeveki.
Ukunciphisa umzimba kakhulu –
Ukuba utyebe kakhulu, ukwehlisa nje i-5% ukusa kwi-10% yomzimba — Yi-4.5 ukusa kwi-9 kg ke leyo ukuba ungu-90 kg — oku kunganciphisa amathuba okuba nohlobo 2 lweswekile!
Ukugcina umzimba usempilweni, jonga kakhulu utshintsho olwenza ekutyeni nendlela ozilolonga ngayo kunokwenza ezi nkqubo zokuhlisa umzimba ngokukhawuleza (crash diets).
Kukhuthalele oku ngokukhumbula iinzuzo zokunciphisa umziba, ezifana nentliziyo esempilweni, ukuba namandla nokuphucula indlela ozijonga ngayo.
Isongezelelo se-Manna Blood Sugar Support, esithatyathwa rhoqo emva kokutya, sinokunceda ukulawula imilinganiselo yeswekile egazini, sinciphise i-insulin, ukubawela ukutya okuneekhabohydrate nokusoloko ubawela ukutya ngendlela yemvelo. Le mvaliso inciphisa i-GI (Glycemic Index) yokutya ukusa kuma-43% ngaloo ndlela kucotha ukufuxwa kwezondlo zokutya emzimbeni zisiya egazini. Ukusebenzisa le mveliso kunokunceda ukunyusa imilinganiselo yamandla kuze ekugqibeleni kuthintele uhlobo 2 lweswekile kunye nenqwaba yeengxaki ezibangelwa sisifo seswekile.
Category: DiabetesBy admin October 21, 2016
PreviousPrevious post:How to Shake Off Belly Fat the Easy Way!NextNext post:How High Blood Sugar Levels Cause Fatty Deposits In the Heart